मुख्यमन्त्रीको मान्छे हुँ भन्दै नर्समाथि जाइलाग्ने को हुन्? « Bagmati Online
मुख्यमन्त्रीको मान्छे हुँ भन्दै नर्समाथि जाइलाग्ने को हुन्?
काठमाडौं– नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा बिहीबार राति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मान्छे हुँ भन्दै नर्समाथि आक्रमण गर्ने समूहका मुख्य व्यक्ति हुन् दाङका मानबहादुर रावत। उनी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का एमाले इन्चार्ज तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन्। पार्टीको नवौं महाधिवेशन चलिरहेका बेला उनी निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक पनि बनाइएका थिए। अधिवेशन तयारीकै लागि देउखुरी पुगेका बेला उनीमथि पार्टीकै एक जना महिला कार्यकर्ताले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। ती महिलाका आफन्तले रावतलाई कुटपिट पनि गरेका थिए।
रावत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विश्वासिला पात्र।
रावतमाथि जबर्जस्ती करणी आरोपमा लामो समय मुद्दा चलेको थियो। उनले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। स्थानीय तहकाे चुनावपछि उनी केही समय वडा कार्यालयमा कर्मचारीका रुपमा कार्यरत थिए। एक जना कार्यपालिका सदस्यमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि उनको जागिर गएको थियो। उनकै कार्यकर्ताले कारबाही माग गर्दै पार्टीमा उजुरी दिएका थिए।
रावतले केही समयअघि मात्र जागिर छोडेका हुन्। उनले केही समय उरहरी गाउँविकास समितिमा सचिव भएर पनि काम गरेका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले उनलाई आफ्नो स्वकीय सचिव पनि बनाएका थिए। रावतलाई हटाउन दबाब बढ्न थालेपछि पाण्डेले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनी पार्टीमै सक्रिय रहँदै आएका छन् । रावत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विश्वासिला पात्र । भेरी अस्पतालमा दाङका ५४ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बिहीबार बेलुकी निधन भएपछि रावतको समूह आक्रमणमा उत्रिएको अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश थापाले बताए।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार रावतको समूहले निरन्तर शौचालयको ढोकामा लात बजारिरह्यो। शौचालयको ढोका पनि फुट्यो। उनीहरू त्यहीं भित्र पसेर आक्रमण गर्न थाले। ज्यान जोगाउन चारै जना नर्सले शौचालयकै झ्यालबाट हामफाले। दुई तलामाथिबाट हाम फालेका उनीहरूलाई चोट लागेको छ।
‘त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै रावतकाे समूहले अस्पतालमा तोडफोड गरी चिकित्सक तथा नर्समाथि आक्रमण गर्न थाल्यो’, थापाले भने। उनले ‘म शंकर पोखरेलको मान्छे हुँ’ भन्दै अस्पतालका उपकरणका साथै झ्यालढोका फोडेकाे डा. थापा बताउँछन्। उनीहरुको आक्रमण शैली त्यत्तिमै रोकिएन। स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै जाइलाग्न थाले। अस्पतालको दोस्रो तल्लामा रहेको कोरोना वार्डमा पसेर रावतको टोलीले सेवा खटिएका नर्सहरूको घाँटी निमोठ्न खाजेको थियो। उनीहरूको पञ्जाबाट उम्किएका नर्सहरू शौचालयमा छिरे।
आक्रमणकाे विराेधमा उत्रिएका भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार रावतको समूहले निरन्तर शौचालयको ढोकामा लात बजारिरह्यो। शौचालयको ढोका पनि फुट्यो। उनीहरू त्यहीं भित्र पसेर आक्रमण गर्न थाले। ज्यान जोगाउन चारै जना नर्सले शौचालयकाे झ्यालबाट हामफाले। दुई तलामाथिबाट हाम फालेका उनीहरूलाई चोट लागेको छ। त्यसपछि आक्रमणकारी रावत समूह पनि तल झरेकाे थियो। भेरी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. विनोद कर्णका अनुसार तल झरिसकेपछि उनीहरूले करिब १ घन्टासम्म आफू मुख्यमन्त्री पोखरेलको मान्छे भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई धक्क्याइरहेका थिए।